Madaafiic lagu duqeeyey magaalada Muqdisho oo sababtey dhimasho & dhaawac – SBC
Madaafiic lagu duqeeyey magaalada Muqdisho oo sababtey dhimasho & dhaawac
Goor Duhurkii Maanta ah Magaalada Muqdisho xarunta dalka waxaa ka dhacay dagaal markiisii hore ku bilowday Madaafic dhaliyay khasaare oo la isweydaarsaday .
Ciidamada Dowlada KMG ah iyo xarakada Alshabaab ayaa madaafiicda ay isweydaarsadeen, waxa ay badigood ku dheceen deegaano ka kala tirsan labada dhinac ee ay xoogaga madaafiicda isweydaarsanayo ku kala suganyihiin kuwaas oo ay u badnaayeen dadkii ku waxyeeloobay dad shacab ah .
Deegaanada ay ku dheceen Madaafiicda waxaa ka mid ah Suuqa Bakaaraha siiba Cabdala Shidaaya, Suuqa Dahablaha iyo Baqaarada Raashinka, dhinaca Xarakada Alshabaab, halka dhinaca kale ay ku dheceen Waaberi iyo xamarweyne.
Sida ay xaqiijiyeen Laamaha Caafimaadka ama Ambalasta dadka daabusha xiliyada ay dhacdooyinkan oo kale dhacaan waxaa ku dhintay tiro ka badan 9 qof halka dhaawacuna uu tiro 15 dhaafayo.
Dhinaca kale Degmada Dharkinlay oo ka mid ah degmooyinka DKMG ah ayaa waxaa maanta ka taagnaa xiisad dagal oo u dhexeeya laba dhinac oo ka wada tirsan Ciidamada DKMG ah ee Soomaaliya .
Ciidamo Militeri ah oo u dhisan hab qabiil iyo kuwo ka tirsan Maamulka degmadaasi ee DKMG ah ayaa maanta la arkayay iyagoo dhowrjeer isku sigtay iskuna cabeystay qoryaha, waxaana ay isku heystaan arimo la xiriira Daqliga ka soo xarooda degmada dharkinlay kaas oo ay cidamada Militeriga doonayan in ay saami ku yeeshaan .
Sikastaba ha ahaatee xisadan ayaa saameyn xoogleh ku yeelatay dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga deegaankaasi iyadoona ay muuqankarto in saraakiisha ciidamada iyo kuwa maamulka gobolkaas ay ka yeelanayaan shirar kala gaar gaar ah .